Ụlọ - betterapp
Ngwa kacha mma maka gam akporo, IOS na Windows nke 2021
Ụwa nke nkà na ụzụ na-eto eto mgbe nile; Kwa ụbọchị enwere ngwa ngwa ndị emepụtara iji mezuo na megharịa ọtụtụ ọrụ na-eme ka ndụ dịkwuo mfe, ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma. N'ihi nke a, anyị na-anabata gị na anyị ohere, e mere na naanị ebumnobi na ị nwere ike nweta kasị n'ime gị Smartphone, Tablet na kọmputa n'agbanyeghị ma ya sistemụ bụ iOS, Android ma ọ bụ Windows ma si otú dịkwuo gị arụpụtaghị ihe.
Ị chọrọ ịchọpụta ngwa na-adịghị agwụ agwụ nke ga-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe? Ebe ị nwere ike ịchọta ngwa kacha mma nke 2021, ka ibudata na ngwa igodo dị ka: Facebook, Twitter, LinkedIn na Instagram, egwuregwu, budata vidiyo na gam akporo, usoro, egwu, pọdkastị, ọdịyo, ndetu, ndepụta nke ngwa maka ọtụtụ. na-achọ mmasị na SMEs, freelancers, mgbatị ahụ, nchekwa & antivirus, ezinụlọ na ntụrụndụ, ikiri football; ọbụna ngwa ịchọta ndị mmadụ n'amaghị, gbanwee ihu site na nwoke gaa na nwanyị, mụta English, maka ụmụaka autistic, ọbụlagodi na ịchọrọ ịhụ akụkọ zuru ezu na listi ngwa google zuru ezu.
Na mgbakwunye, anyị na-ejikọta ọtụtụ narị nkuzi maka gị nke ga-enyere gị aka n'ọrụ ọ bụla na PC gị, ama ma ọ bụ mbadamba, site na usoro iji mepụta akaụntụ netflix ma ọ bụghị naanị nke ahụ, anyị nwere usoro na curiosities. ikekwe agaghị m achọ ịma ka esi achọ aha egwu site na ụda ya
Budata egwuregwu kacha mma na Spanish maka PC n'efu, zuru oke na ọkụ 
Nweta ego site na ngwa iji ree foto ụkwụ
Mepụta aha kacha atọ ọchị na kacha mma maka Ọkụ efu
Ngwa kachasị mma n'ịzụ ahịa n'ịntanetị iji zụọ ahịa site na ngwa
Ngwa kacha mma maka dyslexia akwadoro maka ụmụaka.
￼Ka sss TikTok si arụ ọrụ kacha mma iji budata vidiyo
Ngwa sitere na OS (sistemụ arụmọrụ)
Jikọọ na ngwa gam akporo na iOS kacha mma nke 2021. Ị nwere ike ibudata ha ozugbo na Google play ma ọ bụ App Store. Ịchọrọ ngwa izi ozi ngwa ngwa iji dezie foto, budata egwu, zute ndị si mba ọzọ, lelee onyonyo, vidiyo, ndị na-egwu egwu ma ọ bụ chekwaa ekwentị gị site na iji antivirus dị ka: nchekwa ekwentị avast? anyị nwere ihe niile a na ọtụtụ ndị ọzọ maka ihe ọ bụla gam akporo ma ọ bụ iOS ngwaọrụ.
Ihe mmado: Ngwa kacha mma na ngwa iji chepụta ha
Ngwa Cryptocurrency kacha mma
3 Egwuregwu vidiyo bluetooth efu maka ngwaọrụ gam akporo!
Ngwa Ndekọ ngagharị nwayọ & Ọsọ
Ngwa ahụike na egwuregwu
Anyị na-egosi gị ngwa kachasị mma iji nyochaa ahụike gị ma ọ bụ mmega ahụ gị, yabụ ọ bụrụ na-amasị gị ịgba ọsọ ma ọ bụ mee ụdị mmega ahụ ọ bụla ma chọọ ijide ọrụ gị na ihe ịrịba ama dị mkpa; Ebe ị ga-ahụ kacha mma ngwa. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite usoro ihe omume ma ị maghị ebe ị ga-amalite, Budata ngwa ọ bụla ma nwee onye na-enye ọzụzụ n'ịntanetị ma ọ bụ tụọ anya njem na igwe igwe gị.
Ngwa kacha mma maka ịgba ọsọ - Nhọrọ maka Ios na gam akporo
Ngwa 7 kacha mma na-akwụ gị ụgwọ ịnya ụgbọ ala
Ngwa 10 kacha mma maka mmega ahụ
Ngwa kacha mma iji mee mgbatị ahụ n'ụlọ n'efu!
Ngwa kacha mma ị ga-eso egwuregwu - Nhọrọ iri maka iOS na gam akporo
Ngwa 7 kacha mma iji zụọ n'ụlọ
Ngwa maka ụmụ akwụkwọ (agụmakwụkwọ)
Ị chọrọ ịbawanye mmụta mmụta na sayensị gị ma ọ bụ mụta asụsụ dịka Bekee n'efu? Ugbu a ị nwere ike budata ngwa iji gụọ akwụkwọ nke mmasị gị, ndị ntụgharị na-akụziri gị ihe karịrị asụsụ iri ise dị iche iche, yana ngwa mpaghara iji chọpụta obodo na mpaghara ụwa.
Ngwa 15 kacha mma maka ụmụ akwụkwọ 2021
Ngwa iji mụta Bekee ngwa ngwa na ngwa ngwa - Top 10 kacha mma
Ngwa nkuzi 10 maka ndị nkuzi (Android na iOS)
Ngwa 13 kacha mma iji mụọ bekee
Ngwa 12 kacha mma maka ụmụ akwụkwọ kọleji
Ngwa iji budata egwu na ọdịyo
N'agbanyeghị ngwaọrụ ị nwere, ebe a ị nwere ike ịhụ ma ngwa efu na nke akwụ ụgwọ iji nye aka nke gbakwunyere na ngwa teknụzụ gị.
Ngwa iji budata egwu na vidiyo efu na Youtube site na ekwentị ma ọ bụ Kọmputa gị
Ngwa iji gee egwu na-enweghị ịntanetị
Ndị egwu egwu 9 kacha mma maka gam akporo na-ekpori ndụ ugbu a!
Ngwa iji budata egwu na android efu!
Ngwa kacha mma ka ịdekọ oku na gam akporo
Ngwa 10 iji budata egwu Youtube
Categories Họrọ udi android Nkà na imewe Comida Ihe Ntụkọ Ịzụ ahịa sports mmụta Entretenimiento Web site ego Foto Ngwaọrụ IOS Emmanuel Egwuregwu Ngwa kacha mma Egwu na odi Akụkọ & Akwụkwọ akụkọ Nhazi Ubu oke Ndị na-egwu vidiyo na ndị ndezi Nyocha Ahụike & Ahụ ike Bụrụ nne na nna Enweghị Ngalaba Social Nkuzi Uncategorized
Ọnọdụ nkwekọrịta izugbe
Nwebiisinka 2019 - 2022 | BestApp | Ikike niile echekwabara
LinkedIn facebook Pinterest youtube RSS twitter instagram facebook-oghere rss-oghere jikọrọ-oghere Pinterest youtube twitter instagram